ओम डेभलपमेण्ट बैङ्कको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण: १७ दशमलव ६९ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने तयारी | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर ओम डेभलपमेण्ट बैङ्कको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण: १७ दशमलव ६९ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने तयारी
मुख्य खबर, लगानी 64 views
बैङ्कले सार्वजनिक गरेको आव २०७४/७५ को दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार रू. १५ करोड ३ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा २० दशमलव ९९ प्रतिशतले कम हो । बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा घटेकाले नाफा घटेको देखिन्छ । दास्रो त्रैमासमा बैङ्कको चुक्तापूँजी ५७ प्रतिशतले बढेर रू. २ अर्ब १३ करोड पुगेको छ भने रिजर्भ कोषमा रू. ९१ करोड ५५ लाख छुट्याएकोे छ । बैङ्कको लगानी रू. ८७ करोड ९६ लाख रहेको छ भने बैङ्कले सम्भावित जोखिम व्यवस्थाको लागि रू. ४ करोड ७२ लाख छुट्याएको छ । साथै बैङ्कको आगामी फागुन २५ गतेको साधारणसभामा १७ दशमलव ६९ प्रतिशत बोनस शेयर विरतण गर्ने प्रस्ताव रहेको छ ।
वर्गिकरणः विकास बैङ्क
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. २२९
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. ७७५
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्यः रू. २२३
१८० दिनको भारित औसत मूल्य: रू. २६८
अध्यक्षः सुशील कुमार गोशली
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः विश्व मोहन अधिकारी
प्रधान कार्यलयः चिप्लेढुङ्गा, पोखरा
स्टक सङ्केतः ओडीबीएल
बैङ्कको महत्वपूर्ण वित्तीय परिसूचकहरु (रू. हजारमा)
बैङ्कको चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दाः
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा १३ दशमलव ९९ प्रतिशतबाट घटेर ७ दशमलव ०३ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । बैङ्कले दास्रो त्रैमाससम्ममा रू. १७ अर्ब ५८ करोड निक्षेप सङ्कलन गरी रू. १५ अर्ब ७७ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी रू. ३२ करोड २८ लाख, कर्मचारी खर्च रू. ७ करोड ६ लाख, अन्य सञ्चालन खर्च रू. ६ करोड ४८ लाख र सञ्चालन नाफा रू. २२ करोड २१ लाख रहेको छ ।
बैङ्कको स्थिर सम्पत्ति ४९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १५ करोड ९३ लाख र अन्य सम्पत्ति ९ दशमलव ५७ प्रतिशतले बढेर रू. २२ करोड ३५ लाख पुगेको छ ।
पूँजीकोष लागत ८ दशमलव ४ प्रतिशत र पूँजीकोष पर्याप्तता १८ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ । बैङ्कको निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ ।
बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आवको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार तरलता अनुपात २७ दशमलव ३४ प्रतिशत, प्रति शेयर आम्दानी(वार्षिक) १४ दशमलव ०७, मूल्य आम्दानी अनुपात (वार्षिक)१६ दशमलव ७१, र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ४२ दशमलव ८४ रहेको छ । बुधवारको मूल्य नेटवर्थको साढे १ गुणा छ ।
खरीद चापः बैङ्कको बुधवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप ३ गुणा बढी भएको छ । सो अवधिसम्म १० हजार ९० कित्ता शेयर खरीद र ३ हजार ३ सय १५ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग रहेको थियो ।
२२ नोभेम्बर २०१७ २१ फेब्रअरी २०१८
मैनबत्ती विश्लेषणः बैङ्ककोे ५७ दिनको कारोबारको अन्तिम दिनमा ह्याम्मर आकृती बनेको छ । यस आकृतीले आगामी दिनमा शेयर मूल्य बुलिशमा रिभर्स हुने सङ्ेकत देखाउँछ । यसको विश्वसनियता भने समान्य रहेको छ ।
आरएसआईः बैङ्कको ५७ दिनको कारोबारमा आरएसआई न्यूट्रल जोन (४५ दशमलव २८ स्केल)मा छ । यसले शेयर खरीद विक्री चाप सन्तुलनामा रहेकोे देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशनः कम्पनीको ५७ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन १ दशमलव १६ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको छ ।
मुभिङ एभरेजः बैङ्कको ५७ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । १४ दिने औसत मूल्यरेखा र २६ दिने मूल्यरेखाको बीचमा हालको मूल्य छ । हालको मूल्य रू. २ सय २९ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. २ सय ३४ मा प्रतिरोध पाउन सक्छ भने सस्तिएमा रू. २ सय २६ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।
७ बैशाख २०७५, शुक्रबार १३:०१
७ बैशाख २०७५, शुक्रबार १२:३३